Quothetic quartz waxaa ka mid ah farsamooyin kala duwan oo maandooriyaha lagu buufiyo
Ma aha dhammaan noocyada kala duwan ee kilik inay si dabiici ah u dhacaan. Sababtoo ah dhagaxa dabiiciga ah badanaa waa mataano, quartz synthetic waxaa loo soo saaray si loogu isticmaalo warshadaha. Balaayiin waaweyn, oo aan cillad lahayn, oo kristooyin keli ah ayaa lagu soo saaray muruq-maalka iyada oo loo maro nidaamka biyo-mareenka
Quothetic quartz waxaa ka mid ah farsamooyinka kala duwan ee sheygagga walxaha ka yimaada xallinta heerkulka heerkulka heerkulka sare ee cadaadiska uumiga sareeya, sidoo kale waxaa loo yaqaannaa habka hawo-biyoodka, hydrothermal-ka asal ahaan juqraafi ahaan. Aqoonyahanada iyo cilmu-nafleyda waxay barteen isu dheelitirka biyo mareenka tan iyo bilowgii qarnigii labaatanaad.
Isku duwaha biyo-mareenka
Isku-darka Hydrothermal waxaa lagu qeexi karaa hab ah isku-darka khariidadaha keli-keli ah oo kuxiran adkaanta macdanta biyaha kulul kulul cadaadiska sare. Kordhinta baarista 'quartz crystal' waxaa lagu sameeyaa aaladda oo ka kooban weel cadaadis bir ah oo loo yaqaan 'autoclave', kaas oo nafaqo lagu siiyo biyo. Heerkulka heerkulka ayaa la ilaaliyaa inta u dhaxaysa dhinacyada ka soo hor jeedda qolka koritaanka. Dhamaadka kulul ayaa xalka nafaqada uu noqdaa, halka dhamaadka qaboojiyaha lagu shubo jiirka, oo sii kordhaya rabitaanka.
Faa'iidooyinka habka istiraatiijiyada rubuc hydrothermal hydrothermal
Faa'iidooyinka habka hydrothermal-ka noocyada kale ee koritaanka kristal waxaa ka mid ah awoodda lagu abuuro marxaladaha kala duwan oo aan xasilloonayn goobta dhalaalkeeda. Sidoo kale, alaabada leh cadaadis uumiga sareeya u dhow goobahooda dhalaalaya waxaa lagu kobcin karaa habka biyo-biyoodka. Habka wuxuu kaloo si gaar ah ugu habboon yahay korantada tayo leh oo leh rubucyo tayo sare leh iyadoo la ilaalinayo xakameynta ay ka kooban tahay. Faa'iido darrooyinka dariiqa waxaa ka mid ah baahida loo yaqaan 'autoclaves' qaali ah, iyo suurtagalnimada in fiirsashada kristanka ay sii weynaato haddii tuubbo bir ah la isticmaalo. Waxaa jira qalab iswada oo laga sameeyay muraayad dhaadheer oo derbi leh, oo loo isticmaali karo ilaa xNUMX ° C iyo baararka 300.
DAQIIQADII: Macdanta Oxide
COLOR: Midab la'aan midabbo kala duwan ilaa madow
Index Refractive: 1.54 in 1.55
BLUFRINGENCE: + 0.009
SIYAASADDA GAARKA: 2.59 – 2.65
CUDURKA MOHS: 7
Warbixinta ugu horeysa ee kobcinta biyo-biyoodka ee kiristaalooyinka waxaa daadihiyay cilmiga cilmiga dhulka ee Jarmalka Karl Emil von Schafhäutl (1803 – 1890) 1845 wuxuu ku koray kirismaska ​​microscopic-ka ee kariyaha cabirka.